" လကျမောငျးတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး ပွနျထုတျတဲ့အခါ " - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” လကျမောငျးတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး ပွနျထုတျတဲ့အခါ “
လကျမောငျးထဲကို သန်ဓတေားပစ်စညျး ဘယျလိုထညျ့လဲဆိုတာကို အတျောမြားမြားသိပွီးကွပွီထငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ခုတဈခါမှာတော့
– လကျမောငျးထဲထညျ့ထားတဲ့ သန်ဓတေားပစ်စညျးကို ဘယျတော့ ပွနျထုတျမလဲ?
– ဘယျလိုမြိုးပွနျထုတျမလဲ? ဆိုတာလေးပွောပွပေးပါမယျနျော
– သန်ဓတေားပစ်စညျးရဲ့ သတျမှတျသကျတမျးကုနျသှားလို့ ပွနျလဲရမယျ့အခါ
– ကလေးယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ့အခါ
– အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ အခွားသောကိုယျဝနျတားနညျး ပွောငျးသုံးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ့အခါမြိုးမှာ ပွနျထုတျဖို့လိုပါမယျ။
– ထညျ့စဉျကလုပျထုံးလုပျနညျး အဆငျ့မြားနဲ့ ခပျဆငျဆငျပဲဖွဈပါတယျ။
– ပထမဆုံး သန်ဓတေားပစ်စညျး ထညျ့ထားတယျ့နရောတဈဝိုကျကို ပိုးမှားကငျးစစေရေနျ သငျ့လြျောသောဆေးရညျမြားဖွငျ့သနျ့စငျပါတယျ။
– ပစ်စညျးထုတျမညျ့နရောတဈဝိုကျကို အမှတျအသားပွုပါမယျ။
– ထို့နောကျ အရပွေားကို အနညျးငယျခှဲပွီး ပစ်စညျးကိုထုတျပါတယျ။
– ပွီးလြှငျ ခှဲထားတယျ့နရောကို အရပွေားစပေ့လာစတာဖွငျ့ကပျပေးလိုကျပါမယျ။ ၂ရကျ – ၃ရကျလောကျ ပလာစတာကိုမခှာဘဲထားရပါမယျ။(ဒဏျရာကို ပွနျခြုပျဖို့အထိတော့ မလိုအပျပါဘူး။)
– သန်ဓတေားပစ်စညျးပွနျထုတျခွငျးဟာ မိနဈပိုငျးမြှသာကွာပါတယျ။
-ထုံဆေးထိုးခြိနျလေး တဈခကျြစူးမယျ…..နောကျ ပစ်စညျးထုတျနတေယျ့အခြိနျနဲ့ နောကျထပျ ရကျအနညျးငယျလောကျထိ အနညျးငယျတငျးတာ၊အောငျ့တာမြိုးလေးတော့ ရှိနိုငျပါတယျ။
-အနာသကျသာစဖေို့ ပလာစတာကိုမခှာဘဲ …..အပျေါကပဲ ရခေဲအိတျကပျခွငျး၊ရနှေေးအိတျကပျခွငျးမြား ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
– မိမိသဘောဖွငျ့ ဒဏျရာတဈဝိုကျ လိမျးဆေးမြား မလိမျးဖို့တော့ သတိပေးပါရစေ။
( နာကငျြခွငျး မသကျသာပါက ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။ )
" လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း ပြန်ထုတ်တဲ့အခါ "
လက်မောင်းထဲကို သန္ဓေတားပစ္စည်း ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကို အတော်များများသိပြီးကြပြီထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုတစ်ခါမှာတော့
- လက်မောင်းထဲထည့်ထားတဲ့ သန္ဓေတားပစ္စည်းကို ဘယ်တော့ ပြန်ထုတ်မလဲ?
- ဘယ်လိုမျိုးပြန်ထုတ်မလဲ? ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါမယ်နော်
- သန္ဓေတားပစ္စည်းရဲ့ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်သွားလို့ ပြန်လဲရမယ့်အခါ
- ကလေးယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ့်အခါ
- အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခြားသောကိုယ်ဝန်တားနည်း ပြောင်းသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ့်အခါမျိုးမှာ ပြန်ထုတ်ဖို့လိုပါမယ်။
- ထည့်စဉ်ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်များနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
- ပထမဆုံး သန္ဓေတားပစ္စည်း ထည့်ထားတယ့်နေရာတစ်ဝိုက်ကို ပိုးမွှားကင်းစေစေရန် သင့်လျော်သောဆေးရည်များဖြင့်သန့်စင်ပါတယ်။
- ပစ္စည်းထုတ်မည့်နေရာတစ်ဝိုက်ကို အမှတ်အသားပြုပါမယ်။
- ထို့နောက် အရေပြားကို အနည်းငယ်ခွဲပြီး ပစ္စည်းကိုထုတ်ပါတယ်။
- ပြီးလျှင် ခွဲထားတယ့်နေရာကို အရေပြားစေ့ပလာစတာဖြင့်ကပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ၂ရက် - ၃ရက်လောက် ပလာစတာကိုမခွာဘဲထားရပါမယ်။(ဒဏ်ရာကို ပြန်ချုပ်ဖို့အထိတော့ မလိုအပ်ပါဘူး။)
- သန္ဓေတားပစ္စည်းပြန်ထုတ်ခြင်းဟာ မိနစ်ပိုင်းမျှသာကြာပါတယ်။
-ထုံဆေးထိုးချိန်လေး တစ်ချက်စူးမယ်.....နောက် ပစ္စည်းထုတ်နေတယ့်အချိန်နဲ့ နောက်ထပ် ရက်အနည်းငယ်လောက်ထိ အနည်းငယ်တင်းတာ၊အောင့်တာမျိုးလေးတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
-အနာသက်သာစေဖို့ ပလာစတာကိုမခွာဘဲ .....အပေါ်ကပဲ ရေခဲအိတ်ကပ်ခြင်း၊ရေနွေးအိတ်ကပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- မိမိသဘောဖြင့် ဒဏ်ရာတစ်ဝိုက် လိမ်းဆေးများ မလိမ်းဖို့တော့ သတိပေးပါရစေ။
( နာကျင်ခြင်း မသက်သာပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ )
Ways to Solve Dark Armpit